Ptbotgourou အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ
၆ မတ် ၂၀၁၃
၁၉:၂၄ ၁၉:၂၄၊ ၆ မတ် ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၁၁‎ အရေးမကြီး ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၂ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ဖယ်ရှားနေသည် - bg:Портал:Текущи събития/Януари 2012, ja:Portal:最近の出来事/2012年1月
၁၉:၁၂ ၁၉:၁၂၊ ၆ မတ် ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၁၁‎ အရေးမကြီး ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၁ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ဖယ်ရှားနေသည် - bg:Портал:Текущи събития/Януари 2011, ja:Portal:最近の出来事/2011年1月
၂၁:၅၀ ၂၁:၅၀၊ ၄ မတ် ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၈‎ အရေးမကြီး သမိုင်း ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - tt:Тарих
၁၃:၂၂ ၁၃:၂၂၊ ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၃‎ အရေးမကြီး ကလိုက်မြစ် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - sk:Clyde
၂၁:၄၈ ၂၁:၄၈၊ ၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး လောင်စာဆီ ထိုးသွင်းခြင်း ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying tr:Benzin enjektörü to tr:Yakıt enjeksiyonu
၁၅:၄၈ ၁၅:၄၈၊ ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁‎ အရေးမကြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying fa:کالیفرنیا to fa:ایالت کالیفرنیا
၂၂:၀၈ ၂၂:၀၈၊ ၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂‎ အရေးမကြီး အန်းဒရွိုက် (မိုဘိုင်းလ်စက်လည်ပတ်ရေးစနစ်) ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying ta:கூகுள் அண்ட்ராய்டு to ta:ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதளம்
၁၃:၃၂ ၁၃:၃၂၊ ၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး အဗ္ဒူရာမန် ဝါဟစ် ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying th:อับดูร์ราห์มาน วาฮิด to th:อับดูร์ระห์มัน วาฮิด
၁၅:၀၀ ၁၅:၀၀၊ ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး အီရီထရီးယားနိုင်ငံ ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying ckb:ئەریتریا to ckb:ئێریتریا
၂၁:၁၇ ၂၁:၁၇၊ ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၄‎ အရေးမကြီး ဂေဟဗေဒ ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying ml:പരിതഃസ്ഥിതിക ശാസ്ത്രം to ml:ആവാസ വിജ്ഞാനം
၀၇:၀၇ ၀၇:၀၇၊ ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၄‎ အရေးမကြီး ဝီလီယံ မင်းသား ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ml:വില്യം രാജകുമാരൻ
၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃
၂၁:၁၄ ၂၁:၁၄၊ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂‎ အရေးမကြီး ဝီကီပီးဒီးယား ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying ksh:Wikkipedija to ksh:Wikipedia
၀၉:၀၂ ၀၉:၀၂၊ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၇၆‎ အရေးမကြီး ဝိပဿနာကျင့်စဉ် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ar, bg, cs, de, eo, es, fr, he, hi, it, ja, ko, lt, lv, ne, nl, pl, pt, ru, si, sv, te, th, tr, zh
၁၁:၂၈ ၁၁:၂၈၊ ၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂‎ အရေးမကြီး တိုကျို တက္ကသိုလ် ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying vi:Đại học Tokyo to vi:Đại học Tōkyō
၁၀:၀၁ ၁၀:၀၁၊ ၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂‎ အရေးမကြီး စကြဝဠာ ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying tl:Uniberso to tl:Sansinukob
၁၄:၄၉ ၁၄:၄၉၊ ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ထရန်စစ်စတာ ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying new:ट्रान्जिस्टर to new:त्रान्जिस्तर
၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃
၁၄:၃၄ ၁၄:၃၄၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂‎ အရေးမကြီး ဘီးတဲလ်အဖွဲ့ ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying yi:די ביטעלס to yi:די ביטלס
၁၈:၃၃ ၁၈:၃၃၊ ၃၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ အရေးမကြီး ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying pag:Republika na Dominique to pag:Republika na Dominikana
၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃
၂၂:၂၁ ၂၂:၂၁၊ ၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၄‎ အရေးမကြီး ကဲရီဘူးသမင် ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying nn:Reinsdyr to nn:Rein
၂၃:၁၃ ၂၃:၁၃၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၃၀၁‎ အရေးမကြီး မစ်(ဂ်)-၂၉ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ဖယ်ရှားနေသည် - my:အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉
၁၆:၃၁ ၁၆:၃၁၊ ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၀‎ အရေးမကြီး မော်လဒိုက်နိုင်ငံ ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying si:දිවෙහි රාජ්ජේ to si:මාලදිවයින
၁၃:၄၂ ၁၃:၄၂၊ ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၇‎ အရေးမကြီး မေ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - bxr:5 һар
၀၁:၂၁ ၀၁:၂၁၊ ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၀‎ အရေးမကြီး မောလ်ဝဲလ် ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying ko:악성코드 to ko:악성 소프트웨어
၁၉:၂၁ ၁၉:၂၁၊ ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၂‎ အရေးမကြီး လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်းနိုင်ငံများစာရင်း ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying sk:Zoznam štátov podľa HDI to sk:Zoznam štátov podľa indexu ľudského rozvoja
၁၉:၅၇ ၁၉:၅၇၊ ၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ကရီယန်ဆတ်ချိုမာနန်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying en:Kriangsak Chomanan to en:Kriangsak Chamanan
၁၉:၀၁ ၁၉:၀၁၊ ၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၄‎ အရေးမကြီး ကွာလာလမ်ပူမြို့ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - or:କୁଆଲାଲୁମ୍ପୁର
၁၀:၀၂ ၁၀:၀၂၊ ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ အရေးမကြီး အီး (အက္ခရာ) ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying uz:E (harf) to uz:E (lotin)
၀၄:၄၂ ၀၄:၄၂၊ ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ အရေးမကြီး ဒီ (အက္ခရာ) ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying uz:D (harf) to uz:D (lotin)
၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၁၆:၁၁ ၁၆:၁၁၊ ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၉‎ အရေးမကြီး အော်ယောငှက် ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying vi:Phalacrocorax niger to vi:Cốc đen
၁၇:၁၆ ၁၇:၁၆၊ ၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃‎ အရေးမကြီး ခရစ်ချပ်ချ်မြို့ ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying zh:基督堂市 to zh:基督城
၁၃:၃၇ ၁၃:၃၇၊ ၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂‎ အရေးမကြီး ချန်နိုင်းမြို့ ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying hy:Չենայ to hy:Չեննայ
၁၂:၂၄ ၁၂:၂၄၊ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂‎ အရေးမကြီး မမ်မိုရီ ကတ်ဒ် ‎ r2.7.2) (Robot: Modifying uk:Картка пам'яті to uk:Карта пам'яті
၀၈:၄၂ ၀၈:၄၂၊ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၈‎ အရေးမကြီး အညိုရောင်ငှက်ပုတီး ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - vi:Lonchura atricapilla
၁၃:၃၁ ၁၃:၃၁၊ ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၄‎ အရေးမကြီး ဘေရွတ်မြို့ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - kab:Birut
၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂
၁၃:၅၇ ၁၃:၅၇၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - lt:San Fransiskas
၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂
၀၆:၀၄ ၀၆:၀၄၊ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၂‎ အရေးမကြီး ကျောက်ကပ် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ka:თირკმელი
၀၀:၄၈ ၀၀:၄၈၊ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂‎ အရေးမကြီး လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - ko:자유 아시아 방송
၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂
၀၈:၂၁ ၀၈:၂၁၊ ၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄‎ အရေးမကြီး စက္ကူ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - sr:Хартија
၁၆:၀၃ ၁၆:၀၃၊ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃‎ အရေးမကြီး ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ခြင်း ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - sv:Valövervakning
၁၂:၀၄ ၁၂:၀၄၊ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ဓမ္မသစ်ကျမ်း ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - bg:Нов Завет
၀၂:၁၆ ၀၂:၁၆၊ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၂‎ အရေးမကြီး နေးလ် အမ်းစထရောင်း ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - jbo:nil.armstryg.
၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂
၁၈:၄၉ ၁၈:၄၉၊ ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ အရေးမကြီး မိဂယ်သေ သာဗင်တေး ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - kk:Мигель де Сервантес
၁၇:၃၇ ၁၇:၃၇၊ ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၁‎ အရေးမကြီး မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ml:മൈക്രോനേഷ്യ
၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂
၁၈:၂၆ ၁၈:၂၆၊ ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၃‎ အရေးမကြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့ ပေါင်းထည့်နေသည် - so:Manchester United FC တည်းဖြတ်နေသည် - vi:Manchester United F.C.
၁၈:၁၂ ၁၈:၁၂၊ ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၈‎ အရေးမကြီး မန်ချက်စတာ စီးတီး ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့ ပေါင်းထည့်နေသည် - so:Manchester city တည်းဖြတ်နေသည် - vi:Manchester City F.C.
၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂
၀၈:၃၄ ၀၈:၃၄၊ ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၂‎ အရေးမကြီး ခရီရေးတစ်ဖ် ကွန်မွန်း လိုင်စင် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ja:クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂
၀၃:၅၇ ၀၃:၅၇၊ ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - zh-yue:喬治亞州
၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂
၁၀:၅၄ ၁၀:၅၄၊ ၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၁‎ အရေးမကြီး အတောင်နီခွေးခေါ်ရစ် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - bn:খয়েরি-ডানা পাপিয়া
၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂
၂၃:၄၀ ၂၃:၄၀၊ ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃‎ အရေးမကြီး တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - sco:Sooth Carolina
၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂
၀၂:၀၈ ၀၂:၀၈၊ ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၀‎ အရေးမကြီး ဘန်ဒေါင်းမြို့ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ur:بندونگ